डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर - Dainikee News::
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
इलाम, पुस २९ । स्वास्थ्य शिक्षा सुधार लगायतका ६ वटा माग राखी पुस २५ देखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। केसीको नसा नभेटिँदा रगत तथा पिसाब परीक्षण गर्न नसकिएको उनका सहयोगी डा. रामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीको यो १६ औँ अनशन हो। गत बुधबारदेखि इलाम नगरपालिकाको फूलगाछीमा उनी अनशन बसेका हुन्। यसअघि भएको सम्झौता विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि उनले त्यसलाई अनसनको मूल मुद्दा बनाएका छन्।
यसअघि उनी १५ औं अनशन बस्न जुम्ला पुगेका थिए। तर, सरकारले उनलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो। उक्त अनशनको २७ औं दिनमा सरकारले उनीसँग सहमति गरेको थियो। त्यही सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएपछि डा. केसी इलाममा अनशन बसिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २९, २०७५ /Sunday, January 13th, 2019, 1:57 pm